४ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकम ३ अर्ब नजिक - DURBAR TIMES
HomeEconomy४ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकम ३ अर्ब नजिक
४ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकम ३ अर्ब नजिक
सेयर बजारको परिसूचक नेप्से ४. ७२ अंकले घटेको छ। आइतबारको कारोबारपछि नेप्से १ हजार ६४० अंकमा कायम भएको छ।
यस दिन कारोबार रकम भने उच्च छ। २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। यस दिन बैंकिङ १४, होटल १५, विकास बैंक ६, फाइनान्स २, उत्पादन १५ र जीवन बीमा समूह ७ अंकले घटेका छन्।
ब्यापार २४, जलविद्युत १९, निर्जीवन बीमा १०, अन्य ५ र माइक्रोफाइनान्स २९ अंकले बढेका छन्।
आइतबार सबैभन्दा धेरै शेयर कारोबार शिवश्री हाइड्रोपावरको २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ भने अपि पावरको १६ करोड ८७ लाख, प्राइम कमर्शियल बैंकको १५ करोड ६८ लाख, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १२ करोड २४ लाख, एनआइसी एशिया बैंकको १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंकको १ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको कारोबार यहि साता भित्र खुल्ने, को भयो रजिस्ट्रार ?
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको शेयर सूचीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल स्टकएक्सचेञ्ज (नेप्से) ले इन्स्योरेन्सको शेयर सूचीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो। सूचीकरण शाखाका अनुसार इन्स्योरेन्सको शेयर केहि दिनमै सूचीकृत भएर यहि साता देखिनैकारोबारमा आउनेछ । इन्स्योरेन्सको शेयर शेयरधनीहरुको डिम्याट ख…
नेपाल फाइनान्सको १२५% हकप्रद सेयर मंसिर ४ बाट खुल्दै
नेपाल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड (NFS) ले मंसिर ४ गतेबाट चुक्ता पूँजीको १२५ %हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। फाइनान्सले चुक्ता पूँजीको १२५% अर्थात हाल कायम १ कित्ता बराबर नयाँ १.२५ कित्ताअनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको हो। यसअनुसार फाइनान्सले एक सय रुपैयाँ अंकितदरका १६ करो…
अपि पावरको हकप्रद शेयर आजबाट बिक्री खुल्ला !
काठमाडौं : आज शुक्रबार (कात्तिक १४ गते) देखि हकप्रद अपि पावरको सेयर बिक्रीखुला भएको छ । कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको ५६ लाख ७० हजार कित्ता (४७%)हकप्रद सेयर बिक्री खुुला गरेको हो । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गरेको छ । लगानीकर्ताले यस हकप्रदसेयरमा सिद्धार्थ क्यापिटल,…
Previous articleनेकपाको एकीकृत अस्तित्वमा गम्भीर संकट : महासचिव पौडेल
Next articleनवनियुक्त तीन राजदूतबाट शपथ ग्रहण